दीपक परियार, लेखनाथ, पुस ३, २०७४
चुनावको मेसोमा करोडौं रुपैयाँ ठगेर ४ भारतीय व्यापारी पोखराबाट फरार भएका छन् । बजार मूल्यभन्दा झण्डै आधा रकममा सामान पाइने लोभमा अग्रीम पैसा बुझाएका ग्राहकलाई ठगेर उनीहरु फरार भएका हुन् ।
निर्वाचन आयोगले दिएको आदेशको अवज्ञा गर्दै मन्त्रिपरिषद्ले त्रिविमा १ हजार ४ सय २० दरबन्दी थप गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगलाई दबाब दिइरहेको छ । पूरा पढ्नुहोस्
माधव घिमिरे, पुस ३, २०७४
वीरेन्द्र केसी, पुस ३, २०७४
प्रदेश ५ मा प्रतिनिधिसभाका २४ र प्रदेशसभाका ५२ निर्वाचन क्षेत्र छन् । प्रदेशसभामा निर्वाचित हुने अधिकांश नयाँ अनुहार छन् । प्रतिनिधिसभामा भने धेरै पुरानै दोहोरिएका छन् । प्रतिनिधिसभामा एमालेका ११, माओवादीका ६, कांग्रेसका ५, राष्ट्रिय जनमोर्चा र संघीय समाजवादीका एक/एक जना विजयी भए ।
लीलावल्लभ घिमिरे, पुस ३, २०७४
चन्द्र कार्की, विद्या राई , पुस २, २०७४
कान्तिपुर संवाददाता , पुस १, २०७४
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन समानुपातिकतर्फ ७५ जिल्लाको मत गणना सकिएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ ।
माधव सयपत्री, पुस १, २०७४
भीमबहादुर सिंह, मंसिर २९, २०७४
भेरी नगरपालिका १ कालेगाउँका शक्तिबहादुर बस्नेत त्रिभुवन मावि खलंगाका पूर्वविद्यार्थी हुन् । बस्नेतले त्यहाँबाट २०४३ का एसएलसी गरेका थिए । उनले सोही विद्यालयमा ७ वर्षसम्म अध्ययन गरे । त्रिवेणी नलगाड नगरपालिका ५ ऐरारीका गणेशप्रसाद सिंह मावि खलंगाकै पूर्वविद्यार्थी हुन् । मावि खलंगामा ६ वर्षसम्म अध्ययन गरेका सिंह २०४० का एसएलसी उत्तीर्ण हुन् । त्यस्तै शिवालय गाउँपालिका ७ भिउसका करवीर शाही पनि त्रिभुवन मावि खलंगाका पूर्वविद्यार्थी हुन् । २०४२ मा उक्त विद्यालयमा प्रवेश गरेका शाहीले २०४५ मा एसएलसी उत्तीर्ण गरेका थिए ।
प्रतिकूल मौसमका कारण त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुने विभिन्न गन्तव्यका आन्तरिक उडान प्रभावित भएको छ ।
प्रदेश १ को राजधानी कहाँ राख्ने भन्ने यकिन नहुँदा अन्योल बढेको छ । विराटनगर, इटहरी वा अरु कुनै स्थान राजधानी बन्ला भन्ने अन्योल भएकै अवस्थामा विभिन्न जिल्लामा राजधानी बनाइनुपर्ने मागसहित प्रदर्शन भइरहेको छ ।
उत्तर गयामा श्राद्ध गर्ने श्रद्धालुहरुको भिड
‘नयाँ सरकारमा भ्रष्टलाई ठाउँ नदेऊ’
‘जनमतको अवमूल्यन नहोस्’
यसरी बनाइन्छ ‘वाचिपा’
विद्या राई, मंसिर २६, २०७४
जनादेशपछि देउवाको अवरोध
नारायण ढकाल, पुस ३, २०७४
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा वाम गठबन्धनले पाएको सफलतापछि उत्पन्न भएको प्रकम्पन अझै शान्त भएको छैन । वाम गठबन्धनका दुबै घटकले यो घटनालाई सकारात्मक र परिणाममुखी बताएका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
सम्पादकीय, पुस ३, २०७४
राष्ट्रिय सभा सदस्य चयन पद्धति बहुमतीय कि एकल संक्रमणीय भन्ने विवादका कारण कानुन बन्न नसक्दा राष्ट्रिय सभा गठन अनिश्चित बनेको छ । यसले प्रतिनिधिसभालाई पूर्णता दिन पनि बाधा पैदा गरेको छ । पूरा पढ्नुहोस्
भोलि, मिथक र यथार्थ
अभि सुवेदी, पुस ३, २०७४
मनमोहन अधिकारी नेपालका पहिलो कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री भएपछि ब्रिटेनको ‘इकोनोमिक्स’ पत्रिकाले लेख्यो– ‘एउटा कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट रहंँदैन, जब ऊ नेपालको प्रधानमन्त्री हुन्छ ।’ पूरा पढ्नुहोस्
वैदेशिक रोजगारीका अलमल
वैदेशिक रोजगार व्यवस्थापन हुन नसक्नुको मूल कारण श्रम, परराष्ट्र र गृह मन्त्रालयबीचको आपसी अविश्वास हो । यी तीन निकायबीच बलियो समन्वय नभएसम्म वैदेशिक रोजगार व्यवस्थित, मर्यादित र सुरक्षित हुन सक्तैन । पूरा पढ्नुहोस्
१६ दिने अभियानको सार्थकता
नारायणी देवकोटा, पुस ३, २०७४
लैंगिक विभेदमा आधारित हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियान ‘लैंगिक हिंसाविरुद्ध सबै जुटांै, कोही नछुटांै’ भन्ने नाराका साथ भर्खरै सकिएको छ । २० वर्षदेखि मनाइँदै आएको अभियान यस वर्ष पनि देशभर महिलामाथि हुने हिंसा कम गर्न के–के गर्न सकिन्छ भन्ने विषयमा छलफल, प्रतिबद्धता र योजना तयार गरेर मनाइएको सार्वजनिक भइरहेका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
प्रा. कृष्ण पोखरेल, पुस २, २०७४
जनता सितिमिति बोल्दैनन् तर जब बोल्छन्, दिगदिगन्त थर्किने गरी बोल्छन् । हो, यसपटक ती २०४६ वा २०६२/६३ सालजस्तो सडकमा उत्रेर जिन्दावाद र मुर्दावादको भाषामा बोलेनन् । तिनले देशदुनियाँले सुइँकोसमेत नपाउने गरी आफ्नो आवाज मतपेटिकामा भरे । पूरा पढ्नुहोस्
एटीएम सुरक्षित बनाऊ
सम्पादकीय, पुस २, २०७४
अटोमेटेड टेलर मसिन (एटीएम) लगायत विद्युतीय कार्डहरूमा जोखिम बढ्दै गए पनि तदनुरूप सुरक्षाका उच्चतम उपाय अझै अवलम्बन गरिएका छैनन् । पूरा पढ्नुहोस्
मनोस्वास्थ्य अनुकूल कार्यस्थल
डा. धनरत्न शाक्य, पुस २, २०७४
स्वस्थ मनस्थितिको मानिस सन्तुलित रूपमा सोच्न, अनुभव र व्यवहार गर्न सक्ने हुन्छ । सुनियोजित र परिलक्षित भएर मेहनत गरी जीवन बिताउँछ । फुर्सदको समय पनि सदुपयोग गर्छ । समाज, छरछिमेक र नातागोतामा परस्पर चालचलन, संस्कृति र समय सुहाउँदो रूपमा मिलनसार भएर बस्न सक्छ । पूरा पढ्नुहोस्
डा. धनरत्न शाक्य
कतारमा अनेसास–नवोदितको ७६ औं डवली
अन्तराष्ट्रिय नेपाली साहित्यिक समाज र नवोदित साहित्यिक वाचनालय कतारको ७६ औं डवली दोहामा सम्पन्न भयो ।
मलेसियाले विदेशी कामदारहरुलाई लक्षित गर्दै नयाँ स्वास्थ्य बिमा योजना ल्याउने तयारी गरेको छ । सरकारले ‘भिएजआइएस’ अर्थात् भोलुन्टरी हेल्थ ईन्सुरेन्स स्किम भनिने स्वास्थ्य बिमा योजना ल्याउन लागेको हो ।
बेलायतबाट लगानी भित्र्याउन पहल
नेपालमा भर्खर सकिएको प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि स्थायी सरकार गठन हुने प्रक्रियाले आशावादी छन् बेलायती एवं नेपाली ।
वरिष्ठ संगीतकार एवं नेपाल संगीत नाट्य प्रज्ञा प्रतिष्ठानका उपकुलपति शम्भुजित बाँस्कोटा हालै हङकङमा सम्मानित भएका छन् । हङकङ बस्दै आएका नेपाली महिलाहरूको संगठन ‘चाँगे धर्ती आमा कोष’ ले गरेको सुमधुर सांगीतिक सौगात–२०१७ को क्रममा बाँस्कोटा सम्मानित भएका हुन् ।
सडक दुर्घटनामा अमेरिकामा नेपाली मुलका भुटानीको मृत्यु
एक सडक दुर्घटनामा अमेरिकामा नेपाली मुलका तीन भुटानीको मृत्यु भएको छ । जसमा चार महिनाकी बालिका समेत छिन् । टेक्सास राज्यको उत्तरी फोर्टवर्थमा आइतबार राति भएको कार दुर्घटनामा ५१ बर्षीय डम्बर कामी, ४५ बर्षीया श्रीमती पवित्रा कामी र चार महिनाकी नातिनी श्यारोन दर्जीको निधन भएको स्थानीय मिडिया फक्स फोरले उल्लेख गरेको छ ।
नेपालमा वित्तीय साक्षरताको क्षेत्रमा काम गरिरहेका युवा प्रकाश कोइरालाले ‘फाइनान्सियल इन्नोभेसन अवार्ड २०१७’ प्राप्त गरेका छन् ।
साउदी अरबले घरेलु कामदारको पारिश्रमिक सुरक्षा गर्न तलब कार्ड अनिवार्य गर्ने नियम शनिबारबाट लागू गरेको छ । साउदीको श्रम तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले ६ महिनाभित्रै सबै रोजगारदाता (स्पोन्सर) ले आफ्ना कामदारलाई यो कार्ड दिनुपर्ने नियम लगाएको हो ।
दोस्रो मिस नेपाल साइप्रसको २०१७ को उपाधि छिरिङ डोल्मा शेर्पाले पहिरिएकी छन् । प्रथम रनरअप सृष्टिना महर्जन र द्वितीय रनरअप पवित्रा घिमिरे घोषित भए ।
एभरेस्ट प्रिमियर लिग (इपिएल) अन्तर्गत दोस्रो सिजनको पहिलो खेलमा सोमबार ललितपुर प्याट्रीयट्सले काठमाडौं किङ्स ११ लाई ८ विकेटले पराजित गर्‍यो । टस जितेर फिल्डिङ रोजेको ललितपुरले उत्कृष्ट बलिङ प्रदर्शन गर्दै काठमाडौंलाई ८९ रनमा अलआउट गरेको थियो । पूरा पढ्नुहोस्
इंग्लिस प्रिमियर लिगको आइतबार भएका खेलमा म्यानचेस्टर युनाइटेड र लिभरपुलले अपेक्षा अनुसार जित हात पार्न सफल भएको छ । म्यानचेस्टरले वेस्ट ब्रुमलाई २–१ ले हरायो । यो सफलतापछि म्यानचेस्टरको ४१ अंक भएको छ र दोस्रो स्थानमा छ । म्यानचेस्टर सिटी ५२ अंकमा शीर्ष स्थानमा छ । लिभरपुलले भने बर्नमाउथलाई ४–० ले पन्छायो । पूरा पढ्नुहोस्
युभेन्ट्सले इटालीको सिरी ए मा आइतबार दोस्रो स्थान कब्जा गरेको छ । उसका लागि उसले बोलोग्नालाई सजिलै ३–० ले हरायो । युभेन्ट्सको यो जितपछि ४१ अंक भएको छ । पूरा पढ्नुहोस्
नेपाली राष्ट्रिय टोलीका कप्तान पारस खड्काको नेतृत्वमा रहेको विराटनगर वारियर्सले हङकङका स्टार ब्याट्सम्यानद्वय अनुस्मन रथ र बाबर हायातलाई टोलीमा समेटेको छ । गत महिना सम्पन्न विश्व क्रिकेट लिग च्याम्पियनसिपको शीर्ष तीन ब्याट्सम्यानमध्येका यी दुई खेलाडीले विराटनगरबाट खेल्ने भएका हुन् । पूरा पढ्नुहोस्
एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) को ट्रफी अनावरणका क्रममा आइतबार सहभागी टोलीका खेलाडी, टिम मालिक र आयोजक । तस्बिर : इलिट जोशी/कान्तिपुर
एभरेस्ट प्रिमियर लिग (ईपीएल) को दोस्रो संस्करण सोमबारदेखि राजधानीमा सुरु हुँदैछ । ६ सहरका फ्रेन्चाइज टोलीको सहभागिता रहने प्रतियोगिताको विजयी टोलीले २१ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ । ठूलो रकमको प्रतियोगिता भए पनि यसपटक विदेशी खेलाडीको सहभागिताले सबैको नजर त्यसतर्फ तानिएको छ । पूरा पढ्नुहोस्
शतक बनाएपछि भारतका शिखर धवन ।तस्बिर : एपी
प्रारम्भिक ब्याट्सम्यान शिखर धवनले आकर्षक रूपमा शतक बनाएपछि श्रीलंकाविरुद्ध वान–डे इन्टरनेसनल सिरिजको निर्णायक खेलमा आइतबार भारतले आठ विकेटको जित हात पारेको छ । यससँगै उसले सिरिज पनि कब्जा गर्‍यो । पूरा पढ्नुहोस्
थाइल्यान्डमा आइतबार सम्पन्न एसीसी यू–१६ इस्टर्न रिजन क्रिकेट प्रतियोगिताको उपाधि जितेपछि नेपाली टिम ।तस्बिर : सीएटी
नेपाल अपराजित रहँदै एसीसी यू–१६ इस्टर्न रिजन क्रिकेट प्रतियोगिताको च्याम्पियन बनेको छ । थाइल्यान्डमा भइरहेको प्रतियोगिताको आइतबारको फाइनलमा नेपालले सिंगापुरलाई ७१ रनले पराजित गर्‍यो । पूरा पढ्नुहोस्
मारेक हामसिकले नेपोलीका लागि सर्वाधिक गोलकर्ताको कीर्तिमानका लागि डिएगो म्याराडोनाको बराबरी गरेपछि नेपोलीले शनिबार टुरिनोलाई ३–१ ले हरायो र त्यही दिन इन्टर मिलानले बेहोरेको हारको भरपूर फाइदा उठायो । इन्टरको हारले नेपोली शीर्ष स्थानमा पनि उक्लेको छ । पूरा पढ्नुहोस्
चालु खर्च धान्न चर्को ब्याजमा ऋण
गोकर्ण अवस्थी, पुस ३, २०७४
दैनिक कार्य सञ्चालनका लागि स्रोत अभाव भएपछि सरकारले ६ प्रतिशतसम्म ब्याज तिरेर धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेको छ । आर्थिक वर्षको पाँच महिना नबित्दै १ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाइएको छ ।
बिमा समितिले बिमा कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) को तलबभत्ता तथा अन्य सुविधामा कडाइ गरेको छ । पछिल्लो समयमा बिमा कम्पनीहरूले सीईओलाई मनपरी ढंगले तलब सुविधा दिन थालेपछि समितिले कडाइ गरेको छ ।
राजु चौधरी, पुस ३, २०७४
नेपाल आयल निगमले सर्वसाधारणका लागि ६ अर्ब रुपैयाँ बराबरको सेयर जारी गर्ने भएको छ । चुक्ता पुँजी वृद्धिको क्रममा रहेको निगमले सर्वसाधारणबाट उक्त रकम जुटाउन लागेको हो । हाल निगमको चुक्ता पुँजी २९ करोड रुपैयाँ छ । चुक्ता पुँजी वृद्धि गरेर २० अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याइने निगमले जनाएको छ ।
भारतमा विद्युतीय सामानको भन्सार महसुल बढयो
एजेन्सी, पुस ३, २०७४
भारत सरकारले घरेलु विद्युतीय उद्योगलाई बढावा दिन र बाहिरबाट आयातित उत्पादनको बिक्री घटाउने उद्देश्यले विद्युतीय उत्पादनहरू टेलिभिजन, मोबाइल फोन, वाटर हिटर र प्रोजेक्टरलगायतको भन्सार महसुलमा वृद्धि गरेको छ ।
मेगा बैंक नेपालले विपन्न वर्गका लागि चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा ४ अर्ब रुपैयाँ लगानी पुर्‍याउने बैंककी कायममुकाम प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अनुपमा खुञ्जेलीले बताएकी हुन् ।
प्रतिनिधि र प्रदेशसभाको चुनाव परिणामले स्थिर सरकार बन्ने स्पष्ट निर्देशन दिए पनि सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक बढ्न सकेन । चुनावपछि एक दिनबाहेक सबै कारोबार दिनमा नेप्से घटयो । उक्त अवधिमा नेप्से करिब २७ अंकले तल ओर्लेको छ ।
कालीगण्डकी नदीमा जलस्तर घटेपछि कालीगण्डकी ‘ए’ आयोजनाको विद्युत् उत्पादन घटेको छ । आयोजनाले १ सय ४४ मेगावाट उत्पादन दिँदै आएकामा यतिबेला दैनिक ८० मेगावाटमा झरेको जनाएको छ ।
विकासको आधार तयार
गोकर्ण अवस्थी, पुस २, २०७४
समृद्धि र स्थायित्वको नारासहित निर्वाचनमा होमिएर सरकार बनाउने प्रस्ट मत पाएको वाम गठवन्धनका लागि धेरै हदसम्म विकासको आधार तयार भइसकेको छ । केही महत्त्वपूर्ण ऐनहरू पारित भएका छन् भने कतिपय निर्माणको चरणमा छन् ।
पहिलो खेलमा ललितपुर प्याट्रीयट्स विजयी - ०४:३६ PMप्रतिकूल मौसमले आन्तरिक उडान प्रभावित - ०४:०७ PMप्रदेश १ को राजधानी कहाँ ? - ०३:२० PMकरोडौं ठगेर भारतीय व्यापारी फरार - ०३:१९ PM समयमा मुआब्जा नपाएपछि निर्माणाधिन गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम सरोकारवालाले ठप्प पारे - ०२:१० PMहुस्सु छिचोल्दै म्याराथन - ०२:१० PMगुजरात र हिमाञ्चलमा बीजेपीकै अग्रता - ०१:५५ PM
कांग्रेसको बहुमत आउँछः प्रधानमन्त्री देउवादुई तिहाइकै आसपास पुग्छौंः एमाले अध्यक्ष ओलीदाहालसँगको अन्तर्वार्ता : एमालेकै अध्यक्ष अबको प्रधानमन्त्री‘चाडपर्वजस्तो मुडमा हुँदै छ निर्वाचन’
तेस्रो किस्ता पाउने शून्यलोकमार्गको कामले गति लियोपहिले दलका उम्मेदवार, अब साझा नेता५० वर्षपछि ‘कमब्याक’
ह्याप्पी बर्थ डे केकी !
‘स्वर’ फिल्मबाट नायिकाका रूपमा डेब्यु गरेकी केकी अधिकारी अहिलेकी चल्तीकी नायिकामध्येमा पर्छिन् । रंगकर्मी बुबा बद्री अधिकारीका कारण पनि एक्टिङको पारिवारिक वातावरणमा हुर्के/बढेकी केकीलाई नायिकामध्ये अभिनय कौशल अब्बल रहेको मानिन्छ । पूरा पढ्नुहोस्
सुगम संगीतमा अहिलेका लोकप्रिय गायकमध्येमा पर्ने प्रमोद खरेलले पहिलो पटक देउडा गाएका छन् । उनले गायिका अनिता चलाउनेसँग देउडा गाएका हुन् । पूरा पढ्नुहोस्
संसारकै प्रख्यात अभिनय कलायात्रा मानिने प्रिमियर–२०१७ डिसेम्बर प्रोगाममा सहभागी हुन नेपाली समुदायका १४ वर्षीय सम्बन्ध भण्डारी हलिउड पुगेका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
सजना बराल, पुस २, २०७४
सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालयका अनुसार नेपालमा वार्षिक ९० वटा जति विदेशी फिल्म छायांकन हुने गरेका छन् । तीमध्ये कपितयले चाहिँ स्थानीय कथा र पात्रलाई पनि टिप्ने गरेका छन् । डकुमेन्ट्रीमा त प्राय: विषयवस्तु स्थानीय नै हुन्छन् । यहीँको ‘इस्यु’ रोज्नेमध्येका हुन्, जारा बलफर र मर्कस स्टेफेनसन । पूरा पढ्नुहोस्
अनमोल केसीका कारण पनि ‘कृ’ यस वर्षको बहुप्रतीक्षित फिल्म बनेको छ । हालका सर्वाधिक स्टारभ्यालु बोकेका अनमोलको ‘गाजलु’ पछि झन्डै दुई वर्षको अन्तरालमा दर्शकसामु आउन लागेका हुन् । माघ २६ देखि प्रदर्शनमा आउन लागेको ‘कृ’ मा अनमोलको जोडीको रूपमा अदिति बुढाथोकीले डेब्यु गर्दै छिन् । पूरा पढ्नुहोस्
गोकर्ण गौतम, पुस १, २०७४
हरियानाको गुडगाउँ र नयाँ दिल्लीको दूरी ४१ किलोमिटर छ । सन् २००३ तिर गुडगाउँको एउटा ठिटो बिहानै घरबाट निस्कन्थ्यो, सुरुमा दिल्लीको आत्मसदन कलेजमा क्लास लिन्थ्यो । त्यसपछि निजी कम्पनीमा काम गथ्र्यो । घर पुग्दा मध्यरात भइसक्थ्यो । बस सधैं ठेलमठेल । यात्रा ज्यादै कष्टकर । पूरा पढ्नुहोस्
‘मिस्टर भर्जिन’ गौरव
डेब्यु फिल्म ‘मञ्जरी’ ले नै गौरव पहारीलाई ‘फोहोरी केटा’ को टयाग लगाइदियो । उक्त टयागलाई यसै वर्ष एउटा गीतले एकाएक रिप्लेस गरिदियो । हेमन्त रानाको गायन रहेको ‘साइली’ गीतमा अभिनय गरेका गौरव त्यसपछि भने साइलाका रूपमा चिनिए । अब भने उनी ‘मिस्टर भर्जिन’ बन्ने भएका हुन् । पूरा पढ्नुहोस्
को हुन् मार्समेलो ?
दर्शकले खचाखच भरिएको डेजा भू क्लबमा बुधबार राति अमेरिकी डिजे मार्समेलोको प्रस्तुति हुने भनिएको थियो । राति एक बजेसम्म पनि मार्समेलो नआएपछि सञ्चालकले डिजे आउन नसक्ने घोषणा गरे । त्यसपछि आक्रोशित भीडले क्लब तोडफोड गरिदियो । पूरा पढ्नुहोस्
अतुल मिश्र, पुस १, २०७४
हामीले नियमित रूपमा दाह्री काट्ने गरेका छौं । तर दाह्री कसरी काट्दा स्वस्थकर एवं वैज्ञानिक हुन्छ भन्ने जानकारी कमैलाई हुन सक्छ । हामीमध्ये धेरैजसोले दाह्री काट्ने तरिका आफ्ना बुवा, काका, दाइ वा कुनै आफन्तबाट सिकेका हुन्छौं । पूरा पढ्नुहोस्
एन्टिबायोटिक्स प्रतिरोध : बढ्दो चुनौतीमुटु रोग जाडोमा झन् जोखिमहातको स्पर्शले पीडा घटाउँछ भारतमा १४ प्रतिशतलाई अस्टियो आर्थराइटिस
गुजरात र हिमाञ्चलमा बीजेपीकै अग्रता
भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको गृहराज्य गुजरातको विधानसभा निर्वाचनमा भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी)ले १०० भन्दा धेरै स्थानमा अग्रता प्राप्त गरेको छ भने भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसले ७० स्थानमा अग्रता लिएको छ। यस्तै पहाडी राज्य हिमाञ्चल प्रदेशमा पनि बीजेपीले नै अग्रता पाएको छ। हिमाञ्चल प्रदेश र गुजरात राज्यको निर्वाचनको मतगणना सोमबार बिहानबाट सुरु भएको छ । पूरा पढ्नुहोस्
अमेरिकाको एट्लान्टा विमानस्थलमा विद्युत आपूर्ति बन्द हुँदा हजारौं यात्रु अलपत्र
बीबीसी, पुस ३, २०७४
अमेरिकाको एट्लान्टास्थित हार्टस्फिल्ड–ज्याक्सन विमानस्थलमा स्थानीय समयअनुसार आइतबार दिउँसो १ बजे केही समयका लागि विद्युत आपूर्ति बन्द भएपछि कैयौं यात्रुहरु अलपत्र परेका छन् ।बिदाको समय सुरु भएसँगै निकै चापमा संचालन भइरहेको व्यस्त विमानस्थलमा विद्युत आपूर्ति बन्द भएपछि त्यहाँबाट उडान तथा अवतरण गर्न लागेका सबै विमानहरुले आफ्नो सेवा स्थगित गरेपछि यात्रुहरु विचल्लीमा परेको बीबीसीले जनाएको छ । पूरा पढ्नुहोस्
रोयटर्स/बीबीसी, पुस २, २०७४
पाकिस्तानको क्वेटास्थित एक गिर्जाघरमा आइतबार भएको आत्मघाती बम आक्रमणमा कम्तीमा ८ जनाको मृत्यु भएको छ । अधिकारीले घटनामा कम्तीमा ४५ जना घाइते भएको जनाएका छन् । स्थानीय संचार माध्यमका अनुसार आक्रमणकारीले गिर्जाघरमा प्रार्थनाका समयमा बम विस्फोट गराएका हुन् । चार जनाको संख्यामा रहेका आक्रमणकारिले विस्फोट गरेलगत्तै गोली प्रहार गरेका थिए । पूरा पढ्नुहोस्
एकजना उत्तर कोरियाली नागरिक आणविक हतियार र यसका पार्टपूर्जाहरु बेच्ने क्रममा अष्ट्रेलियाली नगर सिड्नीमा पक्राउ परेका छन् । उनले उत्तर कोरियामा आणविक हतियारको विकासका लागि रकम जुटाउने उद्देश्यले प्रतिबन्धित आणविक शस्त्र र यसका पार्टपूर्जाहरु बेच्ने गरेका थिए । पूरा पढ्नुहोस्
राहुल गान्धीद्वारा भारतीय कांग्रेसको अध्यक्षको जिम्मेवारी ग्रहण
। रासस, पुस १, २०७४
भारतको प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय कांग्रेसको अध्यक्षको जिम्मेवारी उपाध्यक्ष राहुल गान्धीले शनिबार ग्रहण गरेका छन् । गत १९ वर्षदेखि पार्टीको अध्यक्ष रहेकी सोनिया गान्धीले शनिबार आफ्ना छोरा राहुललाई पार्टी अध्यक्षको जिम्मेवारी हस्तान्तरण गरेकी हुन् । उनले शुक्रबार सक्रिय र पदीय राजनीतिबाट बाहिर बस्ने भन्दै राजनीतिक अवकाशको घोषणा गरेका थिइन् । पूरा पढ्नुहोस्
सिन्हवा, पुस १, २०७४
कोरियाली द्वीपमा जारी तनाव अन्त्य गर्न अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले उनका रूसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनसँग टेलिफोन वार्ता गरेका छन् । अमेरिकी राष्ट्रपतिको कार्यालय ह्वाइटहाउसका अनुसार उनीहरूबीच वार्ता उत्तर कोरियाली परमाणु कार्यक्रमका कारण उत्पन्न तनाव अन्त्य गर्ने विषयमा वार्ता भएको हो । पूरा पढ्नुहोस्
ब्रेक्जिट वार्ता दोस्रो चरणमा
युरोपेली परिषद्का अध्यक्ष डोनाल्ड टस्क (बाँया) र आयोग अध्यक्ष जाँ क्लाउड यान्कर शुक्रबार बेल्जियमको राजधानी ब्रसेल्समा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा । तस्बिर : रोयटर्स
बीबीसी, पुस १, २०७४
रोपेली संघका नेताहरू ब्रेक्जिटसम्बन्धी दोस्रो चरणको वार्ताका लागि शुक्रबार सहमत भएका छन् । युरोपेली संघ (ईयू) मुख्यालमा भएको कुराकानीमा उनीहरूबीच सहमति भएको हो । ब्रेक्जिटको आगामी साता सुरु हुने दोस्रो चरणको वार्तामा बेलायत र युरोपेली संघका देशबीचको दीर्घकालीन सम्बन्धबारे कुराकानी हुने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
४ विद्यार्थीको मृत्यु
उत्तरी फ्रान्सको पर्पिग्ननमा एउटा स्कुल बस र रेल एक–आपसमा ठोक्किँदा कम्तीमा ४ जना विद्यार्थीको मृत्यु भएको छ । दुर्घटनामा कम्तीमा २० जना घाइते भएका छन् । घाइतेमध्ये १० को अवस्था गम्भीर रहेको स्थानीय सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् । पूरा पढ्नुहोस्
‘घुमीफिरी बन्दीपुर’ विमर्श
बन्दीपुर सेवा समिति चितवनले ‘घुमीफिरी बन्दीपुर’ का लेखक चीजकुमार श्रेष्ठलाई शनिबार पाठकसामु उभ्याएको छ । नारायणी कला मन्दिर नारायणगढमा आयोजित ‘घुमीफिरी बन्दीपुर’ माथि विमर्शमा साहित्यकारहरू प्रेमविनोद नन्दन, खगेन्द्र संग्रौला, गायत्री श्रेष्ठ र गोविन्दराज विनोदीले टिप्पणी गरेका थिए । पूरा पढ्नुहोस्
ज्ञानमित्रको विज्ञान पुस्तकगुवाहाटीमा नेपाली भाषा–साहित्य विमर्श‘हामी’ मा कृष्ण र ममतागीताको ‘भावनाको भेल’
कान्तिपुर संवाददाता , मंसिर २९, २०७४
फेसबुकको सुरुदेखिकै फिचर हो– पोक । पोक केका लागि प्रयोग गर्ने कुनै नियम छैन । फेसबुक प्रयोगकर्ताले अन्य प्रयोगकर्तालाई पोक गर्ने चलन छ तर पछिल्लो समय यसको प्रचलन घट्दै छ । पूरा पढ्नुहोस्
एप्पलले किन्यो शाजम गुगल सर्चमा सेलिब्रिटीको उत्तरग्रुपमै प्राइभेट च्याटकान्तिपुर टेलिभिजन आजदेखि एचडीमा
अभिनेता विपिन कार्की बत्तिसपुतलीस्थित शिल्पी थिएटरमा ।तस्बिर : कबिन अधिकारी/कान्तिपुर
उम्दा अनुहार पनि हैन । बलिष्ठ ज्यान पनि छैन । तर विपिन कार्की ‘हिरो’ बनेर देखिए ‘जात्रा’ मा । हुन त त्यसअघि नै उनी ‘पशुपति प्रसाद’ बाट भष्मे डनका रूपमा मासमा चिनिइसकेका थिए । हरेक फिल्म र हरेक चरित्रमा भिन्न अवतारमा पदार्पण हुने विपिनको शैली यति बेला ‘नाका’ मा आउँदै छ । पूरा पढ्नुहोस्
पूर्वलाई एक फन्को
गंगा बीसी, पुस १, २०७४
यात्रा आफैंमा रमाइलो हुन्छ । अप्ठ्याराहरू हुन्छन्, आउँछन् तर पनि यात्रालाई रमाइलो बनाउनुपर्छ । यात्रामा जे आउँछ मजाले पचाउनुपर्छ । त्यसमै रमाउन सक्नुपर्छ । पूरा पढ्नुहोस्
व्यक्तिः भ्यागुतालाई पछ्याउँदै अप्पन मैथिली, अप्पन मिथिलाके–पप कभर डान्सरमसानटार नियति
पूर्व र पश्चिम रुकुम दुई जिल्ला हेर्न एउटा मात्रै जिल्ला शिक्षा कार्यालय तोकिएको छ । शिक्षा विभागको परिपत्रअनुसार पश्चिमका विद्यालयका साथै पूर्वका विद्यालय तथा शिक्षासम्बन्धी सबै काम जिल्ला शिक्षा कार्यालय रुकुम पश्चिमले नै गर्ने भएको हो । पूरा पढ्नुहोस्
रोयल सेलिब्रिटीडेस्क–बेन्च ३, विद्यार्थी ६३ चुनाव प्रचारमा ऊँटमेक्सिकोमा गरियो ‘मुर्कट्टा परेड’ (तस्बिरहरु)
हुस्सु छिचोल्दै म्याराथन
विमल खतिवडा, पुस ३, २०७४
चितवन जिल्लामै पहिलो पटक सोमबार ‘नेपो रोटा मिनी म्याराथन’ को आयोजना गरिएको छ । बिहान ८ बजेर २२ मिनेटमा टाँडी बजारबाट सुरु म्याराथन नारायणगढको लीलाचोकमा आएर टुंगियो थियो । बिहान ८ बज्दा पनि घाम लागेको थिएन । हुस्सु छिचोल्दै म्यारानमा सहभागी हुनेको भिड थियो । कतै घाम देखिन्थ्यो त कतै हुस्सु। पूरा पढ्नुहोस्
माधव घिमिरे, तस्बिर : अंगद ढकालपुस १, २०७४
झट्ट पसेर हेर्दा लाग्छ— यो कुनै ऐतिहासिक संग्रहालय हो । निकै पुराना अनि अनौठा उपकरण र मेसिन हेर्दा कुनै बेलाको युद्धमा प्रयोग गरिएका सामान सुरक्षित गरेर राखिएको थलो पो हो कि जस्तो लाग्छ । पूरा पढ्नुहोस्
गृह जिल्लामा दाहालको ‘कमब्याक’
११ वर्षपछि गृह जिल्ला चितवन फर्किएका दाहाल क्षेत्र नम्बर ३ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यमा विजयी भएका छन् । यस अघि उनी रोल्पा, काठमाडौं र सिराहबाट चुनाव लडेका थिए । पूरा पढ्नुहोस्
तस्बिर : अंगद ढकाल, तस्बिर : अंगद ढकाल,
अप्पन मैथिली, अप्पन मिथिला
भ्यागुतालाई पछ्याउँदै केन्द्रमा ‘आउटसाइडर’घरको आगो सिटीको उडान
ग्रुपमै प्राइभेट च्याटगुगल सर्चमा सेलिब्रिटीको उत्तरएप्पलले किन्यो शाजम ‘पोक’मा परिवर्तन
अनलाइन – के गर्ने के नगर्ने ?
गल्फका आशा सद्भावहुप एन्ड स्टिक रोलिङ रेस मुलुक भित्रैका गन्तव्यमनका कुरा